आइतबार, १९ कार्तिक, २०७४ मा प्रकाशित,
२ नम्बर प्रदेशबाहेक पूरै देश चुनावी सिलसिलामा दुई कित्तामा बाँडिएको छ । पहाडी जिल्लामा बाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चरम रस्साकस्सी देखिन्छ । उपत्यकाका धेरै सिटमा द्विपक्षीय र केहीमा त्रिपक्षीय भीडन्त हुँदैछ । काँग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको ‘लाइफ लाइन’ बताउँदै बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएमा मुलुक साम्यवादतर्फ नजानिँदो गरी मोडिने भनेको छ । उता बाम गठबन्धनले चाहिँ आफूहरूले जितेमा मुलुकमा स्थिरता आउने तर्क पेश गरेका छन् ।
बामगठबन्धन स्थानीय चुनावमा आफूलाई प्राप्त भएको मतमा मख्ख छ भने काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन राजपासँग चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा खिन्न छ । २ नं. प्रदेशको प्रतिनिधि सभाको कूल ३२ सिटमध्ये २० सिट राजपालाई दिएर १२ स्थान आफूले लिएको भए काँग्रेसले एक्लैमा चुनाव लड्दा जित्ने सिटभन्दा बढी सिट हुने आंकलन सो क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू गर्दैछन् । यी तर्कहरूमा कति दम छ, त्यो आगामी पुस पहिलो हप्ताबाटै स्पष्ट हुने नै छ ।
झण्डा, तुल, ब्यानर, नमुना मतपत्र, पर्चा, उम्मेदवार कार्ड, लिफलेट र पोष्टरको व्यापार अकासिएको छ । सहरमा ती सामग्री उत्पादन गर्ने व्यापारी र कामदारहरूलाई भ्याई नभ्याई छ । दिनरात नभनी प्रचारसामग्री उत्पादन र गाउँसहरमा वितरण भैरहेका छन् । नेता र कार्यकर्ताहरूलाई फुर्सद् छैन । सबै हतार दौडेका छन् । जोड घटाउ गर्दै मतदाताको तानातान र फकाउने काम हुँदैछ ।
चुनावी घोषणापत्र हेर्दा सबै पार्टीले पाँच–दस वर्षमा देशै झिलिमिली बनाउने ठेक्का लिएजस्ता देखिन्छन् । जमिनी धरातलभन्दा केही फुटमाथि कल्पना गरेर कोरिएका घोषणापत्र फगत् ‘ढाँटपत्र’ लाग्दैछन् । धनवादी, डनवादी र पुराना नेताहरूकै राइँदाइँले चुनाव विकृत बनाएको छ । ६/६ पटकसम्म एउटै व्यक्ति चुनावमा उठेको दृश्य हाँसोपरक देखिन्छ भने अर्कातिरबाट नयाँ र होनहार युवाहरू टिकट पाउनबाट वञ्चित भएका देखिन्छन् । नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेचाहिँ ‘युवापुस्ता सक्षम छ’ भन्दै यसपाला चुनावमा उठेनन् ।
चुनाव क्षेत्रमात्रै परिवर्तन गरेका छैनन् नेताहरूले । दल अदलबदल समेत गर्न भ्याए । सदाबहार सांसदको उपमा पाएका पुराना काँग्रेसी विजय गच्छेदार घुमिफिरी काँग्रेसमै विलय भए । नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराईलाई वाम गठबन्धनले सम्मानजनक स्थान नदिएपछि काँग्रेसले समर्थन गरेको गर्‍यो ।
कमल थापा एण्ड कम्पनीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहँदारहँदै झापामा काँग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौला विरुद्ध राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई टिकट दियो । ‘गुण्डा नायिके’ भनेर चिनिने दीपक मनाङ्गेलाई एमालेले आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवारकै दरखास्त फिर्ता गर्न लगाई घुमाउरो बाटोबाट प्रदेशमा जित्ने बाटो खोल्यो । उनी विजयपश्चात् एमाले प्रवेश गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।
काठमाडौँमा अझ रोचक चुनावी माहौल छ । काठमाडौँ १ मा प्रकाशमान सिंहसँग विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्र पहिलोपल्ट सांसद बन्न पौंठेजोरी खेल्दै छन् । राजधानीबाटै डा.सूर्यराज आचार्य र किशोर थापासमेत युवा मतदाताका मनमा ढुकढुकी बनेर उदाएका छन् । कांग्रेसका लोकप्रिय युवानेता गगन थापालाई पनि बाम र विवेकशील साझा दुवैको प्रहार गतिलो छ । विवेकशील साझाका उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्लान्–नजित्लान् भन्न सकिने स्थिति छैन तर सहरी युवाहरूको राम्रो मत तान्ने सम्भावना भने क्रमशः बढ्दै छ । यो कुरा स्थानीय निर्वाचनमा विवेकशीलकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले पाएको मतबाटै पुष्टि हुन्छ ।
दुःखको कुरा काँग्रेसले यसपटक लोकप्रिय नेतात्रय धनराज गुरुङ, केबी गुरुङ र गुरुराज घिमिरेजस्ता स्वच्छ छविका नेतालाई टिकट दिएन । एमालेबाट पनि जुझारू नेतृ रामकुमारी झाँक्री र इमान्दार नेता ठानिने ठाकुर गैरे चुनावी माहौलबाट किनारीकृत भए । पार्टीमा सुकिलामुकिला र धनवादले घर गरेको यो दृष्टान्त हो । काँग्रेस, एमाले र माकेहरूमा अब सिद्धान्तको रोइलो गर्नेहरू यसैगरी पाखा लाग्दै जानेछन् । मूलधार भनिएका यी पार्टीहरूको झण्डा, नाम र कार्यकर्ता मात्रै फरक देखिएका हुन् । सारमा काम गराई र भिजन करिब उस्तैउस्तै छ । यी तिनै हुन् जसले भ्रष्ट लोकमानलाई चौतारो र साहसी सुशीला कार्कीलाई शूलीमा चढाए ! कोही कसैभन्दा कम छैनन् । सबैमा भाइभतिजावाद, फरियावाद, धनवाद र डनवादले घर गरेको छ । नेक्सस (मिलीभगत राजनीति) पोलिटिक्सलाई संरक्षण गर्न यिनकै ठूलो हात रहेको छ । जसबाट देशले निकास नपाएर झन्झन् भासमा पर्दैछ ।
देशैभरि ट्राफिक प्रहरीले ‘नो हर्न’ नीति ल्याएझैँ चुनावमा पनि भ्रष्ट नेतालाई ‘नो भोट प्लिज’ को सुनामी ल्याउन सकियो भने मात्र नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल अत्यधिक प्रयोग गर्ने युवा समूहले राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि आक्रमक ढंगले नियमित अभियान सञ्चालन गर्न ढिलो भैसकेको छ । युवा मतदाताहरूमा यो चेतना क्रमशः विस्तारित होओस् । वर्तमानको चासो यही हो ।